Archive du 20170802
Loza teny Ankazobe 30 no maty, 80 naratra
Ankizy sy tanora mpikambana amin'ny Sampana Mpanazava sy Tily (SaMpaTi) sy Sampana Tanora Kristianina (STK) avy amin’ny Fiangonana FJKM any amin’ny Synaodam-paritany Soavinandriana
Birao politikan’ny Antoko TIM Nampionona fianakaviana Tsiandopy Jacky
Tonga namangy sy nitondra teny fampiononana ny fianakavian’i Tsiandopy Jacky Mahafaly teny Ivato ny birao foiben’ny antoko Tiako I Madagasikara, ny talata hariva teo.
Fifidianana ahemotra amin’ny 2020 Mila fitsapan-kevi-bahoaka, hoy i Gaby Vakiniadiana
Naneho ny heviny mikasika ilay resabe mandeha momba ny fanalavam-potoana kasain’ny filoha Hery Rajaonarimampianina hatao Atoa Gaby Vakiniadiana omaly.
Raharinirina Jacques Aimé Tsy vonon-kihavana ny fanjakana
Toa tsy misy mpihaino na antso an’efitra ny fanehoan-kevitry ny mpitondra momba ny raharaham-pirenena.
Marc Ravalomanana Miantso fifanampiana
Tsy niandry ela ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady fa tonga nijery sy nampahery avy hatrany teny amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, raha vao nahare ny zava-doza niseho tany Anjozorobe nihatra tamin’ireo tanoran’ny fiangonana FJKM avy any amin’ny faritra Soavinandriana.
Alain Ramaroson Amin’ny 8 aogositra ny didim-pitsarana
Amin’ny talata 8 aogositra izao indray izany no voambaran’ny avy eo anivon’ny fampanoavana fa hivoahan’ny didim-pitsarana
Fahafatesan’i Mamy Rakotoarivelo Hametraka fitoriana ireo zanany
Mifamahofaho tanteraka ny raharaha nahafaty ny Filohan’ny Kongresin’ny tetezamita teo aloha Mamy Rakotoarivelo.
Nosy Be Hell Ville Atosika hitaky fahaleovantena ?
Nambaran’ny filoham-pirenena ho mamboly korontana ireo tsy mitovy hevitra amin’ny fanjakana nandritra ny diany tany Nosy be, izay nijerena ny momba ny seranam-piaramanidina asiam-panamboarana.
Tranga hafahafa Nivoahana afo manga ny tendan’ireo akoho
Ahitana tranga hafahafa foana ao Antsirabe eto. Mbola mitana ny sain’ny olona aloha ireo biby mivoaka alina mihinana atim-biby toy ny kisoa hatramin’izao dia misy tranga hafahafa indray miseho.
Halatra am-piangonana alahady Vehivavy iray sarona tao Mahazoarivo
Ela nitoratorahana tokoa! Renim-pianakaviana iray tsy ampoizina no tratra tamin’ny resaka halatra poketra tao amin’ny Ekar Mahazoarivo-Antsirabe ny alahady 30 jolay lasa teo.
Maizina tanteraka ny fiainan’ny Malagasy amin’izao fotoana izao.
Taksibe nitrifana teny Behoririka Fiara 1 simba, olona 3 naratra
Omaly maraina tokony ho tamin’ny 7 ora no nitrangana lozam-pifamoivoizana saika nanahirana tetsy Behoririka.
Taom-pianarana vaovao 108 ireo sekoly tsy havela hisokatra
Rehefa nomen’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena fotoana maharitra hahafahan’izy ireo
ISPM Antsobolo Voka-pikarohana 200 aranty eny amin’ny Carlton
Voka-pikarohana manodidina ny 200 isa nanomboka omaly no hampirantian’ireo mpianatry ny sekoly ambony « Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar » etsy amin’ny Carlton Anosy.
CMR PARAMED Hankalaza ny faha-herin-taona nijoroany